प्राकृतिक वातावरणीय कणहरू ग्लोबल वार्मिंगको सीमा कम गर्दछ नेटवर्क मौसम विज्ञान
प्राकृतिक वातावरणीय कणहरू ग्लोबल वार्मिंगको सीमा कम गर्दछ
यो निष्कर्ष ब्रिटेनको लीड्स विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले हासिल गरेको हो। वातावरणमा कणहरू ग्रह पृथ्वीको मौसम परिवर्तन गर्न सक्षम छन्, सूर्यको प्रकाश अवशोषित वा प्रतिबिम्बित गरेर। यी कणहरू सवारीहरू र उद्योग द्वारा उत्पादन गरिन्छ, तर त्यहाँ पनि ती ग्रहहरू वायुमण्डलमा प्राकृतिक रूपमा उपस्थित छन्।
अध्ययन अनुसार तिनीहरू वैज्ञानिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेका छन् 'प्रकृति Geoscience', तातो वर्षहरूमा तिनीहरूले मौसम चिसोयसैले ग्लोबल वार्मिंगको हदसम्म कम गर्ने।
यो अन्वेषणमा पुग्न, अन्वेषकहरूले वनको आगो र रूखहरूद्वारा उत्सर्जित ग्याँसहरूबाट हुने धुँवाको प्रभावको नक्सा बनाउन कम्प्युटर मोडेलको साथ वायुमंडलीय नापहरू मिलाए। तसर्थ, तिनीहरूले त्यो जान्न सक्थे 'ग्रहको तापक्रम बढ्दै जाँदा, बिरुवाहरूले पातबाट बढी वाष्पशील ग्याँसहरू छोड्छन्, ग्याँसहरू, उदाहरणका लागि, पाइन वनहरूलाई पाइन गन्ध दिन्छ। एक पटक हावामा, यी ग्याँसहरू साना कणहरू गठन गर्न सक्नुहुन्छ»जसले सूर्य राजाको उर्जालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। फलस्वरूप, पृथ्वी शीतल हुन्छडा। क्याथरिन स्कट अनुसार, अध्ययन को नेतृत्व लेखक।
यो चिसो, नकारात्मक मौसम प्रतिक्रिया रूपमा चिनिन्छ, यसैले आंशिक रूपमा तापमान वृद्धि को क्षतिपूर्ति। जंगल वातानुकूलितको रूपमा कार्य गर्दछ र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारण तापक्रम कम गर्दछ।
उनको पक्षका लागि यस अध्ययनका सह-लेखक डोमिनिक स्प्राक्लेनले भनेका छन् कि "सामान्यतया मौसमको शुरुवातमा तापक्रम बढाउनु भनेको त्यो तापक्रमलाई अझ राम्रो बनाउनु हो, जुन सकारात्मक प्रतिक्रिया हो"। तथापि, "ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा कटौती ग्लोबल वार्मिंगको खतरनाक स्तरबाट बच्न आवश्यक छ"।
यस चाखलाग्दो विषयको बारेमा बढि जान्नको लागि हामी सिफारिस गर्दछौं यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » प्राकृतिक वातावरणीय कणहरू ग्लोबल वार्मिंगको सीमा कम गर्दछ
स्पेनको सबैभन्दा चिसो ठाउँहरू के के हुन्?
के जलवायु परिवर्तन आर्थिक फाइदाको लागि अवसर हो?